mpitoto ahitra manokana
Fitaovana: Aluminium, Sandblasting + Anodizing
Fitaovana: Masinina mandroso amin'ny CNC Lathe sy Milling
Fanamarinana: ISO9001 sy ROHS mifanaraka
Fitsaboana ambonin'ny tany: Sandblasting + Anodizing
Loko: Pink, manga, volomparasy, mainty, mena
Entana: 2,5 x 2,5 x 1.8 santimetatra
Fampiasana: Ho an'ny sigara, fikosoham-bary
Nahavita fanatsarana bebe kokoa ny vokatra izay nahatonga ny grinder ho tsara kokoa noho ny teo aloha!
1. Ny vokatray dia manana nify fikikisana maranitra izay miorina tsara amin'ny fikosoham-bary ny karazan-javamaniry rehetra, manomboka amin'ny ahitra maivana indrindra ka hatramin'ny farany matevina miaraka amina mora mivadika vitsivitsy.
2. Ny efijery vaovao azontsika esorina vaovao dia lalina kokoa ary mifanaraka tsara amin'ny farany ambany. Natao manokana izy io mba hitazomana fitaovam-piadiana bebe kokoa sy haharitra kokoa. Io dia hahafahanao mitoto ahitra indray mandeha indray ary hisoroka anao tsy handraraka azy eo am-panokafana ny tapany ambony.
3. Ilay «grinder» namboarintsika 2.5 "dia nosy vita tsara vita amin'ny firaka aliminioma mavesatra. Ny fitaovana avo lenta dia mahatonga ny efitrano hisokatra malalaka sy mora foana, hihazona ny nify foana ary ho mora diovina.
1. Mety amin'ny fikolokoloana sy ny fanapahana santionany amin'ny karazan-javamaniry isan-karazany, anisan'izany ny faka, taho, ravina, voninkazo, voankazo, voa, sns.
2. Mety amin'ny fikosoham-bary sy fanorotoroana ny famakafakana sy ny fahitana ny sakafo sy ny fanafody fanafody;
3. Izy io dia mety amin'ny fanorotoroana tsara sy ny fikosoham-bolo amin'ny santionany mafy, salantsalany ary marefo, ary mety amin'ny fitaovana malefaka sy lasitike ary misy fibre koa. Ireo fitaovana azo potipotehina sy totoina dia ahitana tavy fibrous, akora simika, fanafody, tany, fotaka, vatan'ny zavamaniry, poti-trondro, solika, plastika, fako, volon'ondry, lamba ary fitaovana maro hafa.
ara-nofo Aluminium, Sandblasting + Anodizing
FITAOVANA Masinina mandroso amin'ny CNC Lathe sy Milling
Fanamarinana ISO9001 sy ROHS mifanaraka
Anaran'ny marika HUAYI
Fitsaboana ambonin'ny tany Sandblasting + Anodizing
Loko Pink, manga, volomparasy, mainty, mena
zavatra 2,5 x 2,5 x 1.8 santimetatra
Fampiasana Ho an'ny sigara, fikosoham-bary
Inona no atao hoe grinder?
Ny grinder dia fitaovana iray izay azo ampiasaina hikikisana ireo tapa-kazo marihitra ho lasa poti-kazo izay azo ampiasaina amin'ny tonon-taolana. Ny grinder dia manana endrika samihafa, manomboka amin'ny kely sy tsotra ka hatramin'ny fitaovana misy 'sivana' telo na efatra hahazoana Skuff.
Ny fitaovana dia misy ampahany izay mifanentana amin'ny fananganana efitrano boribory mihidy. Ny ambony dia matetika kely kokoa noho ny ambany. Misy tsimatra amin'ny lafiny roa ao amin'io efitrano io. Mihombo ireo tsimatra ireo mba tsy hifampikasihan'izy ireo rehefa avadika amin'ny lalana mifanohitra ireo faritra.
Manaraka: grinder logo manokana
Grinder CNC Herb
Mpihinana Herb Titanium
Grinder Herb paraky
sary famantarana manokana momba ny rongony
sary famantarana manokana momba ny grinder